Akụkọ - nchọpụta ụlọ ọrụ | Ọnụ ahịa PLA ka dị elu n'ihi plastik na -emebi emebi, lactide akụrụngwa nwere ike bụrụ isi ihe asọmpi na ụlọ ọrụ PLA.
Nchọpụta ụlọ ọrụ | Ọnụ ahịa PLA ka dị elu n'ihi plastik na -emebi emebi, lactide akụrụngwa nwere ike bụrụ isi ihe asọmpi na ụlọ ọrụ PLA.
PLA siri ike ịchọta, ụlọ ọrụ dịka Levima, Huitong na GEM na -agbasawanye mmepụta. N'ọdịnihu, ụlọ ọrụ ndị maara teknụzụ lactide ga -enweta uru zuru oke. Zhejiang Hisun, Teknụzụ Jindan, na teknụzụ COFCO ga -elekwasị anya na nhazi.
Dị ka ndị otu na-ahụ maka ego (Jinan, onye nta akụkọ Fang Yanbo) si kwuo, na ọganihu nke atụmatụ carbon abụọ na mmejuputa iwu mgbochi plastik, plastik ọdịnala ejirila nwayọọ nwayọọ daa n'ahịa, ọchịchọ maka ihe ndị na-emebi emebi amụbawo ngwa ngwa, na ngwaahịa na -anọgide na -adị ụkọ. Otu onye isi ụlọ ọrụ na Shandong gwara onye nta akụkọ sitere na Cailian News, “Site na uru nke obere carbon na nchekwa gburugburu ebe obibi, atụmanya ahịa maka ihe na-emebi emebi sara mbara. N'ime ha, a na -atụ anya na ihe ndị na -emebi emebi nke PLA (polylactic acid) na -anọchi anya ga -emebi emebi. Uru dị na ọsọ, ọnụ ụzọ ụlọ ọrụ na teknụzụ mmepụta bụ ndị mbụ mebiri egwuregwu a. ”
Otu onye nta akụkọ si na Cailian News Agency gbara ajụjụ ọnụ ọnụ ụlọ ọrụ edepụtara wee mụta na mkpa PLA dị ugbu a na -abawanye. Site n'enyemaka dị ugbu a, ọnụ ahịa ahịa nke PLA na -arị elu n'ụzọ niile, ọ ka siri ike ịchọta. Ka ọ dị ugbu a, ọnụ ahịa ahịa nke PLA arịgoro yuan/ton 40,000, ndị nyocha na -ebu amụma na ọnụahịa ngwaahịa PLA ga -adị elu n'oge adịghị anya.
Na mgbakwunye, isi mmalite ụlọ ọrụ ndị a kpọtụrụ aha kwuru na n'ihi ụfọdụ ihe isi ike teknụzụ dị na imepụta PLA, ọkachasị enweghị ezigbo ụlọ ọrụ mmepụta ihe maka teknụzụ njikọ nke lactide akụrụngwa dị elu, ụlọ ọrụ nwere ike mepee teknụzụ nke ụlọ ọrụ niile. A na -atụ anya PLA ịkekọrịta oke nkesa ụlọ ọrụ.
Ọchịchọ maka ihe PLA na -abawanye
A na -akpọkwa polylactic acid (PLA) polylactide. Ọ bụ ụdị ihe ọhụrụ sitere na bio nke mmiri mmiri polymerization nke lactic acid mepụtara dị ka monomer. Ọ nwere uru nke ịdị mma biodegradability, nkwụsi ike ọkụ, nguzogide mgbaze na nhazi dị mfe. A na -ejikarị ya na nkwakọ ngwaahịa na efere tebụl, ọgwụgwọ ahụike na nlekọta onwe onye. , Ngwa ihe nkiri na mpaghara ndị ọzọ.
Ka ọ dị ugbu a, ọchịchọ zuru ụwa ọnụ maka plastik na -emebi emebi na -eto n'ike n'ike. Site na mmejuputa iwu “mmachi rọba” na “mmachibido plastik”, a na-atụ anya na a ga-eji ihe na-emebi emebi dochie ihe karịrị nde tọn tọn iri na 2021.
Dị ka ihe dị iche iche nwere ike imebi ihe, PLA nwere uru pụtara ìhè na arụmọrụ, ọnụ ahịa yana ọnụ ọgụgụ ụlọ ọrụ. Ọ bụ ugbu a ụlọ ọrụ kacha tozuru oke, mmepụta kachasị, na-ejikarị eme ihe, yana plastik na-emebi emebi nke bio dị ọnụ ala. Ndị nyocha na -ebu amụma na ka ọ na -erule afọ 2025, a na -atụ anya na agụụ ụwa maka polylactic acid ga -agafe nde tọn 1.2. Dị ka otu n'ime ahịa na -eto ngwa ngwa maka acid polylactic, a na -atụ anya na obodo m ga -eru ihe karịrị tọn 500,000 nke PLA chọrọ ka ọ na -erule 2025.
N'akụkụ ọkọnọ, ka ọ na -erule 2020, ikike mmepụta PLA zuru ụwa ọnụ bụ ihe dịka tọn 390,000. N'ime ha, Nature Works bụ onye nrụpụta polylactic acid kachasị ukwuu n'ụwa nwere ikike mmepụta kwa afọ nke tọn 160,000 nke polylactic acid, ihe ruru 41% nke ikike mmepụta ụwa niile. Agbanyeghị, imepụta polylactic acid na mba m ka dị obere, ọtụtụ ahịrị mmepụta pere mpe, na mbubata na -egbokwa akụkụ nke ihe a na -achọ. Ndekọ ọnụ sitere na Nchịkwa Ọchịchị Ọchịchị steeti na -egosi na na 2020, mbubata PLA nke obodo m ga -eru karịa tọn 25,000.
Ụlọ ọrụ na -arụsi ọrụ ike gbasaa mmepụta
Ahịa na-ekpo ọkụ adọtakwara ụfọdụ ụlọ ọrụ ọka na-arụ ọrụ miri emi na ụlọ ọrụ biochemical iji lekwasị anya n'ahịa oke osimiri na-acha anụnụ anụnụ nke PLA. Dabere na data sitere na Tianyan Check, enwere ụlọ ọrụ 198 na-arụ ọrụ/na-adị ndụ ugbu a gụnyere "polylactic acid" na mpaghara azụmahịa nke obodo m, agbakwunyere ndị ọhụrụ 37 n'ime afọ gara aga, mmụba nke afọ na afọ. ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 20%. Mmasị nke ụlọ ọrụ edepụtara maka itinye ego na ọrụ PLA dịkwa oke elu.
Daysbọchị ole na ole gara aga, onye isi ụlọ ọrụ EVA ụlọ ọrụ Levima Teknụzụ (003022.SZ) kwupụtara na ọ ga -abawanye isi obodo ya site na nde yuan 150 na Jiangxi Academy of Sciences New Biomaterials Co., Ltd., wee jide 42.86% nke mbak Jiangxi. Ụlọ akwụkwọ sayensị. Onye dị mkpa na -ahụ maka ụlọ ọrụ ahụ gosipụtara na mmụba isi obodo na Jiangxi Academy of Sciences ga -amata usoro ụlọ ọrụ ahụ n'ihe ndị nwere ike imebi ma zụlite isi akụ na ụba ọhụrụ maka mmepe ụlọ ọrụ na -esote.
A na -akọ na Jiangxi Academy of Sciences na -etinye aka na nyocha na mmepe, imepụta na ire nke PLA, ma na -ezube iwu “ihe ruru tọn 130,000 kwa afọ polylactic acid ihe nrụpụta yinye ụlọ ọrụ niile” na usoro abụọ site na 2025, nke nke ngalaba nke mbụ bụ 30,000 tọn/afọ. Na 2012, a na -atụ anya na a ga -etinye ya n'ọrụ na 2023, a na -atụkwa anya itinye akụkụ nke abụọ nke 100,000 tọn/afọ na 2025.
Huitong Co., Ltd. (688219.SH) malitekwara kọmitii njikwa mpaghara Anhui Wuhu Sanshan Economic Development Zone na Hefei Langrun Asset Management Co., Ltd. site na itinye ego na ntọala nke ụlọ ọrụ ngo. N'ime ha, akụkụ mbụ nke ọrụ ahụ ga -etinye ihe dị ka ijeri yuan 2 iji wuo ọrụ PLA na -emepụta kwa tọn 50,000 kwa afọ, yana oge owuwu nke afọ 3, akụkụ nke abụọ nke ọrụ ahụ ga -aga n'ihu na -arụ ọrụ PLA. na mmepụta kwa afọ nke tọn 300,000.
Onye ndu Recycling GEM (002340.SZ) kwuru n'oge na-adịbeghị anya n'elu ikpo okwu mmekorita nke onye ọchụnta ego na ụlọ ọrụ ahụ na-arụ ọrụ rọba 30,000-ton/afọ. Ngwaahịa ndị a bụ PLA na PBAT, nke a na -eji na ịkpụzi ịse ihe nkiri na mpaghara ndị ọzọ.
Ahịrị mmepụta PLA nke Jilin COFCO Biomaterials Co., Ltd., onye enyemaka COFCO Technology (000930.SZ), arụpụtala ọtụtụ ihe. Emebere ahịrị mmepụta ka ọ nwee ike imepụta kwa afọ nke ihe dị ka tọn 30,000 nke ihe ọkụkụ na ngwaahịa polylactic acid.
Onye ndu lactic acid ụlọ Jindan Teknụzụ (300829.SZ) nwere obere ahịrị nnwale nnwale nke 1,000 tọn polylactic acid. Dabere na ọkwa ahụ, ụlọ ọrụ ahụ na -ezube inwe mmepụta kwa afọ nke tọn 10,000 nke polylactic acid biodegradable ihe ọhụrụ. Ka ọ na -erule ngwụcha nkeji mbụ, ọrụ a amalitebeghị iwu ya.
Na mgbakwunye, Zhejiang Hisun Biomaterials Co., Ltd., Anhui Fengyuan Taifu Polylactic Acid Co., Ltd., Zhejiang Youcheng Holding Group Co., Ltd., na Shandong Tongbang New Material Technology Co., Ltd. niile na -eme atụmatụ iwu PLA ọhụrụ. ikike imeputa ihe. Ndị nyocha na -ebu amụma na ka ọ na -erule 2025 Na 2010, mmepụta kwa afọ nke PLA nwere ike iru tọn 600,000.
Ndị ụlọ ọrụ na -ahụ maka teknụzụ mmepụta lactide nwere ike nweta uru zuru oke
Ka ọ dị ugbu a, imepụta polylactic acid site na ntinye polymerization nke lactide bụ usoro bụ isi maka mmepụta PLA, ihe mgbochi teknụzụ ya na-abụkarị na njikọ nke akụrụngwa PLA akụrụngwa lactide. N'ime ụwa, naanị ụlọ ọrụ Corbion-Purac nke Netherlands, Companylọ Ọrụ Nature nke United States, na Zhejiang Hisun mụtara teknụzụ mmepụta nke lactide.
"N'ihi ihe mgbochi teknụzụ dị oke elu nke lactide, ụlọ ọrụ ole na ole nwere ike ịmịpụta lactide bụ ndị mepụtara onwe ha ma jiri ha mee ihe, nke na-eme lactide njikọ dị mkpa na-egbochi uru ndị nrụpụta PLA," onye nyocha ụlọ ọrụ ahụ kwuru. Ka ọ dị ugbu a, ọtụtụ ụlọ ọrụ ụlọ na-emepekwa lactic acid-lactide-polylactic acid nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe site na nyocha nnwere onwe na mmepe ma ọ bụ iwebata teknụzụ. N'ime ụlọ ọrụ PLA na -abịa n'ihu, ụlọ ọrụ nwere ike ịmụta teknụzụ lactide ga -enweta uru asọmpi doro anya, iji kesaa oke nkesa ụlọ ọrụ. ”
Onye nta akụkọ ahụ mụtara na na mgbakwunye na Zhejiang Hisun, teknụzụ Jindan lekwasịrị anya n'ịhazi usoro ụlọ ọrụ lactic acid-lactide-polylactic acid. Ugbu a, ọ nwere tọn 500 nke lactide na ahịrị mmepụta pilot, ụlọ ọrụ ahụ na -ewukwa tọn 10,000 nke mmepụta lactide. Ahịrị malitere ọrụ ikpe n'ọnwa gara aga. Companylọ ọrụ ahụ kwuru na enweghị ihe mgbochi ma ọ bụ ihe isi ike ndị a na -agaghị emeri na ọrụ lactide, na mmepụta oke nwere ike ime naanị mgbe arụchara ọrụ siri ike, mana ọ naghị ewepụ na enwere ebe maka njikarịcha na ndozi. ọdịnihu.
Northeast Securities na-ebu amụma na site na mmụba nwayọ nke ahịa ụlọ ọrụ yana inye ọrụ nke a na-ewu, a na-atụ anya na ego Jindan Technology na uru ụgbụ na 2021 ga-eru ijeri yuan 1.461 na nde yuan 217, mmụba otu afọ na 42.3%. agbanweela na -83.9%tụnyere ụnyaahụ.
Teknụzụ COFCO kwukwara na ikpo okwu mmekorita onye ọchụnta ego na ụlọ ọrụ ahụ amụtala teknụzụ mmepụta na teknụzụ nhazi nke agbụ ụlọ ọrụ PLA niile site na ntinye teknụzụ na ihe ọhụrụ nwere onwe ya, yana ọrụ lactide nke tọn 10,000 na-aga n'ihu na-aga n'ihu. Tianfeng Securities na-ebu amụma na na 2021, a na-atụ anya na teknụzụ COFCO ga-enweta ego ijeri yuan 27.193 na uru ụgbụ ruru ijeri 1.110 ijeri, mmụba kwa afọ nke 36.6% na 76.8% n'otu n'otu.